Fampahalalana avy amin'ny Semalta amin'ny fomba famonosana tranonkala malaza indrindra avy amin'ny Wikipedia
. tahiry txt mba hifehezana sy hifehezana ireo asa atao manararaotra. Ireo tranonkala ireo dia miaro amin'ny alàlan'ny fitenenana amin'ny tranonkala amin'ny tranonkala mba hisorohana ny mpitoraka bilaogy sy ny mpividy tsy manala ny toerany. Ho an'ny vao manomboka, ny fanasitranana tranonkala dia dingana amin'ny fanangonana angona avy amin'ny vohikala sy tranonkala ary mamonjy ary mamonjy azy amin'ny format malalaka - black beret online.
Ny fandraketana ny angon-drakitra ilaina avy amin'ny tranonkala dynamique dia mety ho asa sarotra. Mba hanamoràna ny dingan'ny fanangonana rakitra dia mampiasa robots ny webmasters mba hahazoana ny fampahalalana ilaina haingana araka izay tratra. Ny tranonkala dinamika dia ahitana ny torolàlana 'mamela' sy 'manafoana' izay milaza ireo robots izay ahazoana alalana amin'ny fako ary aiza no tsy misy.
Fanimbana ireo tranonkala malaza avy amin'ny Wikipedia
Ity lesona ity dia mirakitra ny fanadihadiana iray izay notarihin'i Brendan Bailey tamin'ny alàlan'ny fanalana ny tranokala. Nanomboka ny fanangonana ny lisitr'ireo toerana malaza indrindra avy amin'ny Wikipedia i Brendan. Ny tanjon'i Brendan dia ny hamantatra ireo tranokala misokatra amin'ny famokarana angon-drakitra mifototra amin'ny robot. txt rules. Raha toa ianao ka handefa tranokala iray, mandinika ny fandefasana ny tranonkalan'ny serasera mba hisorohana ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona.
Fitsipika fananganana toeram-ponenana
Amin'ny fitaovana fitaterana fitaovam-piraketana, tranonkala manarona dia resaka sora-pady. Ny fanadihadiana amin'ny antsipiriany momba ny fomba fijerin'i Brendan Bailey ny tranonkalan'ny Wikipedia, ary ny fepetra ampiasainy dia voafaritra etsy ambany:
Araka ny fandalinan'i Brendan, ny vohikala malaza dia azo sokajiana ho toy ny Mixed. Ao amin'ny tabilao, dia misy tranokala miaraka amin'ny fitsipika mifangaro ny 69%. Robots Google. Ny txt dia ohatra tena tsara amin'ny robots mixed. TXT.
Fenoy ny fanomezana
Mandidy, etsy ankilany, marika 8%. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny Complete Allow dia midika fa ny tranonkala robots. Ny rakitra txt dia manome programa maoderina ahafahana manala ny tranokala manontolo. SoundCloud no ohatra tsara indrindra entina. Ohatra hafa amin'ny tranokala feno dia ahitana:
uol. fr. br
Ireo tranonkala miaraka amin'ny "tsy notendrena" dia nampiakatra 11% amin'ny totala voatolotra eo amin'ny tabilao. Ny Set Tsy midika hoe ireto zavatra roa ireto: na ny tranokala tsy misy robots. tahiry txt, na ireo tranonkala tsy manana fitsipika ho an'ny "User-Agent. "Examples of websites where the robots. Ny rakitra txt dia "Not Set" dia ahitana:
Ireo tranokala feno tanteraka dia mandràra ny programa maoderina amin'ny fandroahana ny toerana misy azy. Ny Linked In dia ohatra tena tsara amin'ny tranonkala tanteraka. Ohatra hafa amin'ny Site Completed Disallow dia ahitana:
Ny fanasitranana ny tranonkala no vahaolana tsara indrindra hanangonana ny angon-drakitra. Na izany aza, ny fifehezana ireo tranonkala miroborobo dia afaka mitarika anao amin'ny olana goavana. Ity lesona fampianarana ity dia hanampy anao hahatakatra bebe kokoa momba ireo robots. tahiry txt ary misoroka olana izay mety hitranga any aoriana.